ကပျပါပေ့ ပီကရေယျ: "How to BLOG" was launched !!!
"How to BLOG" was launched !!!
ကျနော်ရဲ့ “ကပ်ပါပေ့ ပီကေရယ်” ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကို ဖန်တီးခဲ့တာ အခုဆိုရင် တစ်နှစ်နဲ့ တစ်လ ရှိသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ပို့စ်စတင်ပြီး ရေးဖြစ်တာ စက်တင်ဘာမှပါ။ သူငယ်ချင်း မျက်လုံးနဲ့ မယ်လိုဒီမောင် တို့က လုပ်ပါလား လုပ်ပါလားနဲ့ အားပေးအားမြောက် ပြုခဲ့ကြလို့ ဒီဘလော့ဂ်ကို စပြီး ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ ရေးဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ့်ကို ဘာမှ မရေးဘူးလို့ ရည်ရွယ်တာပါ။ ဒါဆို ဘာလို့ ဘလော့ဂ်လုပ်လဲ လို့ မေးချင်ကြမယ် ထင်တယ်။
ကျနော် ကွန်ပြူတာ ဆိုတာကို စ နားလည်သိကျွမ်း ကတည်းက Programming ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့လို့ Program တွေ ရေးဖို့ပဲ အားသန်ခဲ့ပါတယ်။ Low Level ဖြစ်တဲ့ Assembly ကနေ High Level ဖြစ်တဲ့ VB, C# စတာတွေ လုပ်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း မန်းကို သုံးလေးနှစ်လောက် ပြန်နေဖြစ်လိုက်တော့ Programming နဲ့ အတော်လေး အဆက်ပြတ်သွားတယ်။ အဲဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လုံးဝနီးပါး အနားယူလိုက်ပါတယ်။ အနားယူတယ်ဆိုတာ Programming ကို လုံးဝ မရေးတော့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ အင်တာနက် ဆိုတာနဲ့ နပန်းလုံးနေပါပြီ။ Software Industry ထဲ ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက အမြဲ ပြောပါတယ်။ အခု အင်တာနက်တွေ သုံးရတာ အဆင်ပြေလာတော့ Coding အတော်များများ Snippet အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးစရာ မလိုဘဲ ယူသုံးလို့ ရနေပြီတဲ့။ အခု ခေတ်ကြီးမှာ Programming ဆိုတာ Searching လုပ်တတ်ရမယ်၊ Copy Paste လုပ်တတ်ရင် ရပြီတဲ့။ Ready Made Code တွေ ရှိနှင့်ပြီးသား မို့ပါ။
ကျနော့်ကို သူငယ်ချင်း တချို့က ဟို Forum ဒီ Forum လာဖို့ ဖိတ်ကြတယ်။ လာရေးပါ၊ လာဆွေးနွေးပါပေါ့။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်က ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် မျက်နှာ အနာခံပြီး ကျနော် မသွားပါဘူး။ အာရုံ မများချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အခု ဒီ Social Network ကိုတော့ ၀င်လိုက်ပါပြီ။ လိုအပ်မယ် ထင်လို့ပါ။ ကျနော် ဒီ ဘလော့ဂ်ကို စရေးဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သက်တာ လုပ်ချင်တာတွေ၊ ပေးချင်တာတွေ၊ မျှဝေချင်တာတွေ၊ ပြောပြချင်တာတွေ၊ သိစေချင်တာတွေ၊ တွေးပြချင်တာတွေ များသတဲ့ များလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဒီဘလော့ဂ်လေးကို ကိုယ့်ဖာသာ ကဏ္ဍခွဲပြီး အဲဒီ ခွဲထားတဲ့ ကဏ္ဍ (၆) ခုက လွဲလို့ ဘာမှ မရေးဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ ကဏ္ဍလေးတွေက
မတိမ်မြှုပ် မပျောက်ပျက်စေချင်တဲ့ အရာများကို မျှဝေခြင်း
ကျနော်ရဲ့ အတွေးအခေါ် မှတ်တမ်း
နှလုံးသား အဟာရ စာတိုများ
ဘလော့ဂ်ဆိုင်ရာ လုပ်နည်းကိုင်နည်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစာပေဆိုင်ရာကို ရေးတယ်ဆိုတော့ ဘာကောင်ပါလိမ့်လို့ မတွေးပါနဲ့။ ကျနော် ရိုးရိုးလူပါ။ မြန်မာလို ရေးနေကြတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမို့ မြန်မာစာကို ဂရုစိုက်စေချင်တာပါ။ ကျနော်ဟာ ကျောင်းသားဘ၀က မြန်မာစာ ဆိုတာ ကျနော် မကျက်ချင်ဆုံး ဘာသာပါ။ အပျင်းပြေ ဖတ်ရုံသက်သက်ပဲ လေ့လာခဲ့တာပါ။ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျက်ဖို့ စိတ်မပါဘူး။ လူတိုင်း နီးပါး မြန်မာစာကို အဲလို ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ပဲ ဖြေဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာကျက်စရာ လိုလဲ လို့လည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက တွေးခဲ့ကြတာပါ။ ကျနော် ဘလော့ဂ် တော်တော်များများကို ရောက်ဖူးပါတယ်။ ကျနော် ရောက်ဖူးတဲ့ ဘလော့ရဲ့ ၆၅% လောက်က စာလုံးပေါင်းတွေ မှားကြပါတယ်။ ၇၅% လောက်က စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေ မှားကြပါတယ်။ အမှားဆုံးက ၀ိဘတ် သုံးတာပါ။ “တုတ်နှင့် မောင်မောင်ကို ရိုက်သည်” ဆိုသလိုပေါ့။ ၈၅% လောက်က ပုဒ်အထားအသို မှားကြပါတယ်။ “တုတ်နဲ့ မောင်မောင်ကို ရိုက်တယ်” ဆိုသလိုပေါ့။ ရာခိုင်နှုန်းတွေက ကျနော် ခန့်မှန်းပြီး ပြောတာပါ။
ကျနော် ဖတ်ဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးတချို့ကို နားလည်သလို ပြန်ရေးပြီး (သို့) ကိုးကားပြီး တင်ပြထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အပွင့်လင်းဆုံး ပြောရရင် အတော်များများ စိတ်မ၀င်စားကြဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် မပျောက်မပျက် ထိန်းသိမ်းချင်တဲ့ သဘော၊ မှတ်တမ်းတင်ချင်တဲ့ သဘောနဲ့ “ကျွန်တော်တို့၏ မြန်မာစာ” ဆိုပြီး ဘလော့ဂ်တစ်ခု လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားဖူးသမျှ မြန်မာစာပေဆိုင်ရာ ပို့စ်တွေကို အဲဒီမှာ သွားကူးထည့်ပါတယ်။ လူ အတော်များများ စိတ်ဝင်တစား မရှိမှာ သိတာကြောင့် ဒီဘလော့ဂ်လေး ရှိတယ် ဆိုတာကို တသီးတခြား ပြောမနေတော့ပါဘူး။ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ သဘောပါ။
မပျောက်ကွယ်စေချင်တဲ့ အရာများ ဆိုတာ အများစုက စာအုပ်တွေပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထပ်မံထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်ခံထားရတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ တကြိမ်ပဲ ထုတ်ဝေပြီး ထပ် မထုတ်ဝေတော့တဲ့ ရှားပါး စာအုပ်တွေ၊ စာအုပ်အဟောင်း ဈေးကွက်မှာပဲ တွေ့နိုင်တော့တဲ့ စာအုပ်တွေ အဲဒီ စာအုပ်တွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို မျှဝေပေးတဲ့ စေတနာနဲ့ ပို့စ်တွေရေးခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ် မဟုတ်တာဆိုလို့ မြန်မာငွေစက္ကူတွေရဲ့ ပုံတွေပဲ ရှိပါတယ်။ ကျနော် ကြိုက်တဲ့ အမြတ်တနိုး သိမ်းထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေကို အမြည်းကျွေးပြီး မျှဝေမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပေမယ့် အဲဒီ စိတ်ကူးက အကောင်အထည် မပေါ်သေးပါဘူး။
နောက်ပြီး ကျနော် တောင်တွေး မြောက်တွေး လျှောက်တွေးထားတဲ့ အူကြောင်ကြောင် ကပ်တပ်တပ် အတွေးတွေလည်း တခါတခါ ရေးချတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး နှလုံးသား အဟာရ စာတိုတွေကို ဘာသာပြန်ပြီး ရေးလေ့ ရေးထလည်း ရှိပါတယ်။ ခရီးထွက်ပြီး ပြန်ရောက်ရင်တော့ ကျနော် ခရီးသွား မှတ်တမ်းလေး ရေးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်နှစ်အတွင်း ခရီးထွက် တအား နည်းတာကြောင့် ရခိုင်ခရီးစဉ်နဲ့ ကျိုက်ထီးရိုး ခရီးစဉ် နှစ်ခုပဲ ရေးဖြစ်ပါသေးတယ်။
ကျနော် ဘလော့ဂ်ရေးတဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ကာလ အတွင်းမှာ အများဆုံး လုပ်ဖြစ်တာက တန်းပလိတ်ကို ကလိတာပါပဲ။ ကျနော် ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့ တန်းပလိတ်ကို အများသိ (၄) ခါတိတိ ပြောင်းဖူးပါတယ်။ ပြောင်းကြည့်ဖူးတဲ့ တန်းပလိတ်ပါ ထည့်တွက်မယ် ဆိုရင်တော့ (၈) ခါလောက် ရှိပါတယ်။ တန်းပလိတ် ကိုယ်တိုင် ပြောင်းဖူးတဲ့ လူတွေ သိပါလိမ့်မယ်။ တန်းပလိတ် ပြောင်းရတာ သိပ် လက်ဝင်ပါတယ်။ ကိုယ် တန်းပလိတ်မှာ ထည့်ထားသမျှ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ တစ်ခုမှ မကျန်ရအောင် လိုက်ပြင်ထည့်ရတယ်။ ဒီတော့ ကျနော့ ဘလော့ဂ်မှာ လုပ်ဖူးတဲ့ ကလိဖူးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ကလေးတွေကို တန်းပလိတ် ပြောင်းတဲ့အခါ အထောက်အကူ ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး How To ဆိုတဲ့ လေဘယ်လ်နဲ့ ပို့စ်ရေးထားတတ်ပါတယ်။ ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ Blogging နဲ့ ပတ်သက်တာ ရှိတယ်ဆိုတာ လူသိ အတော်နည်းပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော်ပြန်ဖတ်လို့ ရရင် ပြီးရောဆိုပြီး ကျနော် နားလည်ရုံလောက်ပဲ ရေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ် ရှင်းမပြထားပါဘူး။
ကျနော့် ဘလော့ဂ်ကို လာလည်ပြီး “ဟာ ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး” ဆိုပြီး ပြန်ထွက်သွားမယ့် စာဖတ်သူတွေကို အားနည်းမိတာ အမှန်ပါ။ တကယ်ဆို Blogging နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တွေဟာ Blogger တွေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့် အခု နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော် တန်းပလိတ်ကို လျှောက်လျှောက် ကလိကြည့်ပြီး အသစ်တွေ့တာတွေကို How To Label နဲ့ ပို့စ်တင်ဖို့ အတော်လေး စဉ်းစားရပါတယ်။ မတင်ပြန်ရင်လည်း ကျနော် ဖတ်ထားခဲ့တာ အလကား ဖြစ်သွားမယ်။ တင်ပြန်ရင်လည်း လူတချို့ အတွက်ပဲ သက်ဆိုင်နေလိမ့်မယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဟိုဒီလျှောက်တွေးရင်း ဘလော့ဂ် အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ စိတ်ကူးရသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော် How To BLOG ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဘလော့ဂ် နောက်ထပ်တစ်ခု ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ လိပ်စာက http://knowhow.myanmarbloggers.org ပါ။
ဒီ How To BLOG ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ Blogger.com နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျနော် ကလိဖူးသမျှတွေကို ပို့စ်အနေနဲ့ ရေးထားပါတယ်။ အခု ဒီစာကို ရေးချိန်မှာ ပို့စ်ပေါင်း ၄၈ ပို့စ် တင်ထားပြီးပါပြီ။ ပို့စ်အားလုံးဟာ New Blogger Template (XML Template) အတွက်ပဲ ရည်ညွှန်းပါတယ်။ နောက်ပြီး ပို့စ် အကုန်လုံးဟာ Blogger.com အတွက်ချည်းပါပဲ။
ဒီ ၁၀ ရက်လောက်အတွင်းမှာ ကျနော် ပို့စ်တင် ကျဲသွားပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းရင်းက How To BLOG လေး အသက်ဝင်ဖို့ လုပ်နေရလို့ပါ။ တကယ်လို့ Blogger.com နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးတွေ ဘလော့ဂ်မှာ မရှိဘူး၊ မတွေ့ဘူး ဆိုရင် CBox မှာ အော်ခဲ့ပေးပါ။ ကျနော် ရှာဖတ်ပြီး အမြန်ဆုံး ပို့စ်တင်ပေးပါ့မယ်။ ကျနော် ၀န်ခံချင်တာက အခုရေးပြီးသမျှ ပို့စ် အားလုံးလိုလိုဟာ ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ ကျနော် ကိုယ်တိုင် ရေးထားတာဆိုလို့ နှစ်ပို့စ်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ပါတဲ့ ပို့စ်တွေ အားလုံးဟာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ပြီး အဆင်ပြေမှ တင်ထားတာပါ။ တကယ်လို့ စာဖတ်သူက လုပ်လို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် အသိပေးခဲ့ပါဦး။ ဘာတွေများ မှားလဲ သိချင်လို့ပါ။
ဒီပို့စ် ရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က How To BLOG ကို အသိပေးချင်တဲ့ သဘောပါသလို၊ ဒီနေ့ကနေ စပြီး ဒီ “ကပ်ပါပေ့ ပီကေရယ်” ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ Blogging နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တွေ မတင်တော့ဘူး ဆိုတာ အသိပေးချင်တာလည်း ပါတယ်။ တကယ်လို့ Blogging နဲ့ ပတ်သက်တာ သိချင်၊ လေ့လာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ How To BLOG ကို သွားပေးပါ။ လိပ်စာက http://knowhow.myanmarbloggers.org ပါ။ နောက်ပိုင်းဆို စာဖတ်သူ အားလုံး ဖတ်နိုင်၊ မှတ်သားနိုင်မယ့် ပို့စ်တွေကိုပဲ ဒီနေရာမှာ တင်တော့မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း စာလွှာပါးရင်း နားကြစို့ဗျာ။
Thursday, August 14, 2008 | စာညှနျး Announcement
ဤပို့စ်အား Thursday, August 14, 2008 နေ့တွင် ရေးသားထားပြီး Announcement နာမည်ဖြင့် အညွှန်း သက်မှတ်ထားပါသည်။ ကွန်းမန့်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိလိုလျှင် RSS 2.0 ဖြင့် တောင်းဆို၍ ရယူနိုင်သည်။ လာရင်းနေရာ သို့ ပြန်လည် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။